Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Ekwedọọ » Onye Minista ọhụrụ ọ nwere ike ime Ecuador ike ike njem?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A kpọrọ Sandra Naranjo dị ka Mịnịsta ọhụrụ nke njem maka Ecuador malite na July 1, 2021.
Ecuador na-eche ọkwa ọkwa nke Onye Minista njem nleta ọhụrụ.
Njem nleta na Ecuador ga-abụ ngwa ọrụ akụ na ụba maka mmepe.
Mba ahụ ọ ga-enwe ike ịpụ site na afọ nke COVID?
A na-atụ anya ọkwa na Minista njem nleta ọhụrụ nke Ecuador n'oge na-adịghị anya.
Nọrọ na-ege ntị na eturbonews.com.